ZEUS Myanmar – Page 12
No Comments on Augustလ အတွင်းထွက်ရှိမည့်ဇာတ်ကားများ
2021ရဲ့ august လအတွင်း ထွက်ရှိမည့်ဇာတ်ကားများကို list လုပ်ထားပါတယ်။
The Suicide Squad ( august 5) out now *
Annette ( august 6)
MHA : World hero mission ( august 6)
Kissing Booth3( august 11)
Bechett ( august 13 )
The protege ( august 20)
Reminiscene (August 20)
Demonic ( august 20)
Witcher : nightmare of wolf (august 23)
Candy man ( august 27)
Together (august 27)
Mortal Kombat : Battle of legends ( august 31 ) တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ZEUS followers တွေအနေနဲ့ရောဘယ်ကားကိုအကြည့်ချင်ဆုံးလဲ?
DC Movie Review
Suicide Squad ( or ) James Gunn ရဲ့ အကောင်းဆုံးလက်ရာတစ်ခု
No Comments on Suicide Squad ( or ) James Gunn ရဲ့ အကောင်းဆုံးလက်ရာတစ်ခု
Continue reading “Suicide Squad ( or ) James Gunn ရဲ့ အကောင်းဆုံးလက်ရာတစ်ခု”
Loki ကြောင့် Hulk ဖြစ်သွားတဲ့ Spidey
No Comments on Loki ကြောင့် Hulk ဖြစ်သွားတဲ့ Spidey
အခုတစ်ခါလည်း Spidey လေးခဗျာ loki လက်ချက်နဲ့ Hulk ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
Immortal Hulk: Great Power Comic တွင် Peter Parker လေးတစ်ယောက် Loki လက်ချက်နဲ့ Hulk အဖြစ်ပြောင်းခံလိုက်ပါတယ်။
ကြောက်ကလဲရှယ်ကြောက် ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းလဲမသိ အဲ့လိုဖြစ်နေချိန်Fantastic 4အဖွဲ့မှ Mister Fantastic( Reed Richards) အကူအညီနဲ့ Loki လုပ်တာမှန်းသိသွားပါတယ်။ Loki က Gamma Radiation တွေ spidey ကိုယ်ထဲထည့်လိုက်တာပါ..
Gamma ကသာမန်လူဆိုမတည့်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ mutate ဖြစ်တဲ့ စပိုင်ဒီကတော့ Radiation ဓာတ်ခံကြောင့် Evolveဖြစ် မျိုးရိုးပြောင်းလဲပြီး Hulk Power ရပြီး Hulk အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
သူလုပ်တုန်းကလုပ်ပြီး peter လေးကြောက်နေတာကြည့်ပြီး ရယ်တောင်ရယ်နေပါသေးတယ်။
Hulk ကနေ Spidey Hulk form ပြောင်းနေချိန် Gamma Radiation တွေပြန်စုပ်ယူခဲ့လို့ Spidey လေး Normal ပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်။
Comic ရော LA ရောမှာဆရာသမား Loki တို့ကရှယ်ကိုမွှေတာပါ။
spidey ကိုယ်ထဲကို gamma radiation ထည့်လို့ရလားဆိုတော့ရပါတယ်.. ဘာလို့ဆို spidey က Radioactive Spider ကိုက်တာခံထားရလို့ Radiation ဓာတ်ခံရှိပြီးသားမလို့ပါ။
(Comic – Immortal Hulk – Great Power#1)
Character Info Marvel MCU
Shang-Chi အကြောင်း (Comic Story)
No Comments on Shang-Chi အကြောင်း (Comic Story)
Shang-Chi ဟာ MCU Live-Action လည်းရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်တဲ့ Asian Hero တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Shang-Chi Movie မထွက်ခင်မှာသူနဲ့ပက်သက်ပြီးသိထားစရာအချက်တွေနဲ့သူ့ရဲ့ story ကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။
Shang-Chi / Earth-616
Shang-Chi ဟာဆိုရင်အပြင်လောကရဲ့ Master Of Kung Fu တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ Bruce Lee ကို inspiredထားပြီး Tribute လုပ်ထားတဲ့ Asian Superhero တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
First Appearance အနေနဲ့ Marvel Special Edition#15 (December, 1973)တွင်ပွဲထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Shang-Chiကိုဖန်တီးခဲ့တာတော့ Steve Englehart နှင့် Jim Starlin တို့ကဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
MCU ရဲ့ Shang-Chi မှာတော့မင်းသား Simu Liu ကသရုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ Shang-Chi ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး Master Of Kung Fu ဆိုတဲ့ Title ကိုရလာသလဲဆိုတာဆက်လက်ဖတ်ရှုလိုက်ကြပါ။
Shang-Chi ရဲ့ မူလဘဝ (Origin)
Shang-Chiရဲ့ House of deadly Hand ဆိုတဲ့ Temple မှာကြီးပြင်းလာခဲ့တာပါ။
Marvel ရဲ့ သတ်ဖြတ်ရေးလူသားတွေမွေးထုတ်ပေးတဲ့ templeကြီးပေါ့။
Shang-Chiရဲ့ အဖေနာမည်က Fu Manchu a.k.a Zheng Zu လို့ခေါ်ပါတယ်။Fu Manchu ကတော့ နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကတည်းက immortal ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ crime lord တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
Crime Lord မလို့ သူဟာcrime clan အမြောက်အမြားကိုရှင်းထုတ်ပြီး တစ်ဦးတည်းအုပ်စိုးနေခဲ့တဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ။
MCU မှာတော့ Shang-Chiအဖေဟာ Madarian (Owner Of ten Rings ) ဖြစ်နေပါတယ်။ comic နဲ့ MCU ကတော်တော်ကွဲနေတာပါ။
Shang-Chi ဟာ သူ့အဖေရဲ့ ဇစ်မြစ်ကိုမသိပဲ house of deadly Hand မှာ ကလေးဘဝကတည်းက လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ရေး သိုင်းသမားတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ခံခဲ့ရပါတယ်။သူနဲ့အတူလေ့ကျင့်တဲ့ကလေးတစ်ယောက်ရှိပါသေးတယ်။ထိုကလေးနာမည်က M’Nai လို့ခေါ်ပါတယ်။
Fu Manchu တစ်ယောက် သူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဖက် မျိုးနွယ်စုတစ်ခုကိုလူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်ပြီးနောက်မှ ကလေးတစ်ယောက်ကိုမသတ်ပဲခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ Shang-Chiအတွက် အဖော်ရအောင်လို့ပါ။ ထိုကလေးဟာလည်း Fu Manchuရဲ့ လက်နက်သဖွယ် လေ့ကျင့်ပေးမှုတွေကြောင့် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ရေးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီး နောက်ပိုင်းတွင် Midnight ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ အကြမ်းဆုံးAssassin စာရင်းဝင်လာခဲ့ပါတယ်။
Midnight ဟာ Moon knight ရဲ့ Villainဖြစ်ပြီး ယခုMoon Knight Live-Action တွင်လည်းပါမယ်သတင်းထွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နေ့မှာ Fu Manchu က သားဖြစ်သူ Shang-Chiကို ပထမဆုံး missionအနေနဲ့ သူ့ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ သူကိုသတ်ဖို့စေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ တကယ်လည်းအောင်မြင်စွာသတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာ သေသွားတဲ့ targetရဲ့ မိတ်ဆွေ Shang-Chiကို သူ့အဖေအကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ Shang-Chi သူ့အဖေအကြောင်းသိပြီးနောက်မှာ shock ရပြီး သူ့အဖေကို ဆန့်ကျင်ပြီး New York မှာတစ်ယောက်တည်းနေခဲ့ပါတယ်။
Fu Manchu ဟာလည်း Shang-Chiကသူ့ကိုဆန့်ကျင်လို့ midnight ကို Shang-Chiကိုသတ်ဖို့စေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ midnightဟာမသတ်‌ချင်ခဲ့ပါဘူး။ ငယ်ငယ်ကတည်းရင်းနှီးရတဲ့ သူဆိုလို့ Shang-Chiပဲရှိလို့ပါ။
ငြင်းဆန်လို့မရတဲ့အဆုံးသတ်ဖို့သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Shang-Chi ရဲ့ Kung Fu Skill ကို Midnight အနေနဲ့ မယှဉ်နိုင်ပဲ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပါတယ်။
ထိုအချိန်ကစပြီး Shang-Chiရဲ့ အဖေဖြစ်သူဟာ သားကို သတ်ဖို့ တစ်လောကလုံးမှာရှိသမျှ Kung Fu Master တွေ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ရေး ဂိုဏ်းတွေကိုငှားပြီး သတ်ဖြတ်စေခဲ့ပါတယ်။
Shang-Chi ဟာလည်း ဘယ်လောက်Kung Fu ကြမ်းပါတယ်ဆိုတဲ့ သူတွေလာလာ အကုန်လုံးကို အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Shang-Chi ဟာKung Fu အကျော်အမော်တွေ ဂျပန် သိုင်းသမားတွေ Samurai တွေ အပြင် မွေထိုင်းနဲ့ Boxing ဆရာတွေကိုပင်အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
သိုင်းသမားတွေအပြင်နောက်ပိုင်းတွင် စိန်ခေါ်လာတဲ့ Crime Fighter Hero တွေကိုပင်အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Marvel Knights ဆိုတာကတော့ Shang-Chiပထမဆုံး legal အနေနဲ့ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ crime fighter group ပဲဖြစ်ပါတယ်။
New York မြို့မှာ villainတွေက ထုံးစံအတိုင်းတိုးလာတော့ Shang-Chiဟာလည်း team up ခဲ့ပါတယ်။
Marvel Knights အဖွဲ့ဝင်တွေကတော့
အစပိုင်းမှာ dare devil ဟာ punisher ကိုတားဆီးဖို့လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် Punisherကိုယ်တိုင်ပါဝင်လာပြီး New York ရဲ့ crime gang များကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Spider Mutate တစ်ယောက်ဖြစ်လာခြင်း
Spider-island Event မှာ New York တစ်မျိူးလုံးဟာ Radioactive Virus ပြန့်ပြီး အကုန်လုံး peter parker ကဲ့သို့ စွမ်းအား‌တွေရရှိကုန်ပါတယ်။ weeb တွေပစ်နိုင်တယ် နံရံတွေတွယ်တက်နိုင်ကြပါတယ်။ ဖြန့်တာကတော့ spider-queen ကဖြန့်ပြီး New York တစ်မြို့လုံးကိုခြယ်လှယ်ခဲ့ပါတယ်။ spdiey လိုအစွမ်းရပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကြီးမားတဲ့ပင့်ကူတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲကုန်ပါတယ်။
ပိုးဟာလည်း Petet Parker ရဲ့mutate အသားစလေးကိုစမ်းသပ်ပြီး ဖြန့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
Shang-Chiဟာထိုအချိန်မှာ Spide Sense ဆုံးရှုံးထားတဲ့ Peter Parker ကို Martial Arts ပေါင်းစုံသင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ spdiey ရဲ့ combat skill တိုးတက်လာတာဟာလည်း Shang-Chiကြောင့်ပါပဲ။
Shang-Chiဟာလည်းနောက်ပိုင်းတွင် Spider-Virus ထိပြီး Spdier-Manကဲ့သို့စွမ်းအားတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။ Shang-Chi ဟာ Immortal Weapons ဆိုတဲ့ iron fist ပါဝင်တဲ့ team ကိုဝင်ခဲ့ပြီးနောက် Spider တွေကိုချခဲ့ပါတယ်။ ai apaec ဆိုတဲ့ spdier နဲ့ချပြီးနောက်မှာ Shang-Chiဟာလည်း လုံးဝ ပင့်ကူအကြီးကြီးတစ်ကောင်အသွင်ကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။အစပိုင်းမှာ လက်အပိုတွေထွက်ရာကနေ ပင့်ကူ လုံးလုံးဖြစ်သွားတာပါ။ ဒါပေမဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမာ‌ကျောလို့ spider queenနဲ့ စက်ကွင်းလွတ်ပြီး လူအသွင်ကိုပြန်လည်ပြောင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Spdier-Virus အတွက်ဖြေဆေးကတော့ Anti-Venom ရဲ့ DNA မှရရှိခဲ့ပြီး ပင့်ကူပြောင်းနေတဲ့သူတွေကိုသာမန်ပြန်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
Shang-Chiကတော့ ဖြေဆေးမရခင်မှာတင် လူပုံစံပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီအချက်ကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် Shang-Chi ဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သန်မာတဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
Heros For Hire အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာခြင်း
Heros For Hire ကတော့ Marvel ရဲ့ နာမည်ကြီးcomic event ဖြစ်တဲ့ Civil War အပြီးမှာချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Shang-Chi ဟာ လည်း Superhero group တစ်ခုလိုချင်တာနဲ့ Tony Stark Iron-Man စုစည်းထားတဲ့ Hire For Heros အဖွဲ့ကိုဝင်ခဲ့ပါတယ်။
အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရတဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ Crime တွေတားဖို့ပါပဲ။ Shang-Chiဟာလည်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အရေးပါပါတယ်။ team up missionလုပ်ရင်တောင်သူတစ်ယောက်ထဲနဲ့ အကုန်ပြီးကုန်တာတွေရှိပါတယ်။
ထို့နောက် world war Hulk comic နဲ့ဆက်ပြီး hulk ရဲ့ ကျုးကျော်မှုက earth ကိုရောက်လာပါတယ်။ Illuminati အဖွဲ့ကြောင့် hulk ဟာ space ထဲရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Sakkar ဂြိုလ်မှာ သတ်ဖြတ်ပြီး အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ earth က stark logo နဲ့ အနုမြူကြောင့် hulk ရဲ့ planetဟာပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ သူ့မိန်းမလည်းသေသွားခဲ့ရတာပေါ့။
ဒါကြောင့် hulk ဟာလက်စားချေဖို့ earth ကိုပြန်လာပြီး Superhero ‌တွေကိုပြန်ကျွန်ပြုခဲ့တာပေါ့။
Hulkနဲ့အတူပါလာတဲ့ Warbound အဖွဲ့နှင့် Shang-Chiတို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးနောက်မှာ HUMBUG ဟာ Savage Land ထဲတွင် Brood ဆိုတဲ့ ကူးစက် ဂြိုလ်သားမျိုးစိတ်ကြောင့် mutateဖြစ်ပြီး mind controlလုပ်တာခံလိုက်ရပါတယ်။ humbug ဟာ အဖွဲ့ထဲတွင် Shang-Chi ရဲ့အခင်ဆုံးမိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Shang-Chi ဟာလည်း မဖြစ်မနေသတ်ရတော့မှာဖြစ်လို့ humbugကိုအနိုင်ယူကာ သတ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့နောက်မှ Shang-Chi ဟာ စိတ်ပျက်ပြီး အဖွဲ့မှနှုတ်ထွက်ပြီး တစ်‌ယောက်တည်းနေခဲ့ပါတယ်။
Secret Avnegers Comic မှာတော့ Captain America နှင့် Avnegersအဖွဲ့ဝင်များဟာ Shang-Chiရဲ့ အဖေ Fu Manchu ဟာ မသေသေးဘဲ သေတယ်ဆိုပြီးပျောက်နေရာကနေ Shang-Chiကိုသတ်ဖို့ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ရေးသမားတွေထပ်မံ‌စေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကို captian Americaတို့ကကြိုသိပြီးနောက်မှာ Shang-Chiဆီကိုသွားကယ်ခဲ့ပါတယ်။
Shang-Chi နှင့် cap တို့ combatယှဉ်ချရာမှာ Shang-Chiရဲ့ combat skill ဟာအလွန်မြင့်ပြီး cap ပင်အထင်ကြီးခဲ့ရပါတယ်။
ထို့နောက် Fu Manchuဟာ Shadow Council အကူအညီနဲ့အတူ Shang-Chiကိုသတ်ဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Shang-Chi ကိုမသတ်နိုင်ပဲ avengers တွေနဲ့ ချလို့ Fu Manchuဟာလုံးဝသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
Avengers Vs X-Men storylineအပြီးမှာ captain America နှင့် Iron Man တို့ဟာ ပိုမိုသန်မာတဲ့ Avengers Team မှာ Shang-Chiဟာပါဝင်လာပြီး ပထမဆုံးအနေနဲ့ New Avengersဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ Avengers Missionစဖို့ ဦးတည်လာခဲ့ပါတယ်။
Infinity comic event ဟယ marvel ရဲ့ နာမည်ကြီး limited event တွေထဲကတစ်ခုပါပဲ။ The Builders ဆိုတဲ့ alien race တွေဟာ Universe တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ ဂြိုလ်တိုင်းကိုအုပ်စိုးဖို့ကြံနေပါတယ်။ Planetတော်တော်များများကိုလည်း သူတို့ရဲ့ မြင့်မားတဲ့ နည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီး planet တွေကို လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ The Builders တွေဟာ Creators , Engineer , ဆိုပြီးကွဲထွက်နေပါသေးတယ်။
သူတို့ရဲ့ နည်းပညာတွေဟာမြင့်ပြီး ကြောက်မခမ်းလိလိအုပ်စိုးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
Alephs ဆိုတဲ့ စက်ရုပ်တပ်ကိုတီထွင်ကာSkrull တွေ Kree တွေကိုစစ်ခင်းပြီးအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တခြား မျိုးစိတ်များစွာက်ုလည်း နယ်ချဲ့သတ်ဖြတ်ကာအနိုင်ယူခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် Galactic Councilအဆုံးအဖြတ်အရ Universeရဲ့ protectorအနေနဲ့ Universeကြီးတစ်ခုလုံးပထမဆုံးအနေနဲ့ စည်းလုံးပြီး Universe Alliances အဖွဲ့ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။
Centurai Empire တို့ပါဝင်ပြီး ဒီမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုကြီးဟာ builders ကိုအနိုင်တိုက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ စစ်ပွဲဟာဒီတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ Avengersတွေ space ထဲမှာအလုပ်များနေချိန်မှာ Mad Titan ကြီးThanos နှင့် Black Order ဟာ Earth ကိုလာပြီး Thane (son of thanos) ကိုသတ်ဖို့လုပ်ပါတယ်။
Shang-Chiဟာလည်း Wakanda ကနေ Outrider တွေရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုရင်ဆိုင်ပြီး Wakanda ကိုကာကွယ်ခဲ့ပါတယ်။ Shang-Chi အနေနဲ့ ပထမဆုံး avengers Mission ကတော့ space ထဲက alien တွေနဲ့ ချရတာပါဘဲ။
Thanos ရဲ့ Thane ကိုသတ်မဲ့အစီအစဉ်ပျက်ပြီးနောက်မှာ အဖမ်းခံလိုက်ပါတယ်။ Shang-Chiဟာလည်း avengers ဘဝကိုခဏတဖြုတ်နားခဲ့ပါတယ်။
Protectors နှင့် Agent Of Atlas အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာခြင်း
ဒါက‌တော့ Shang-Chiရဲ့ team up တွေထဲမှာအကောင်းဆုံး team up လို့တောင်ပြောရပြီး သူစိတ်‌ကျေနပ်ပြီး ပျော်ရွှင်မှုတွေရနိုင်တဲ့ အဖွဲ့တွေပါပဲ။
ပထမဆုံး Totally Awesome Hulk , Silk, Ms.Marvel , Jimmy Woo တို့နှင့်အတူ Asain Superhero အဖွဲ့ protectorတွင်ပါဝင်လိုက်ပါတယ်။
ထို့နောက် Space Invasion Mission တွေကိုအတူလုပ်ဆောင်ပြီး silk (spider-girl ) နှင့်အရင်းနှီးဆုံး partner တွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
Jimmy Woo ဟာနောက်ထပ်သော အရည်အချင်းရှိတဲ့ Superheroတွေရှိ‌သေးတာကိုသိလို့ ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာအောင် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့ New Agent Of Atlas အဖွဲ့ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။
New Agent of Atlas ကတော့ marvel ရဲ့နာမည်ကြီး အာရှလူမျိုး Superheroတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ member တွေကတော့
သူတို့ဟာ New Agent Of Atlas အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးနောက်မှာ War Of The Realm Event ကြီးအစပြုခဲ့ပါတယ်။
Midgard ဟာ dark realmတွေရဲ့နယ်ချယ်မှုကိုခံခဲ့ရတယ်။ Dark Relam တွေဟာ Dark Bifost လို့ခေါ်တဲ့ Portal ကိုအသုံးပြုပြီး စစ်တပ်အလုံးအရင်းနဲ့ earth ရဲ့တိုက်ကြီး ကိုးခုကို နယ်ချဲ့ခဲ့ကြတယ်။
Asia ဟာ Sindr ဆိုတဲ့ demonic fire Godness ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုခံရပြီး kingdom of fire ဖြစ်ရမဲ့အရေးပါ။ Sindr ဆိုတာကတော့ demonic fire Godကြီး Surtur ရဲ့သမီးပါ။
သူမဟာ Asia ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာတော့ Shang-Chiပါဝင်တဲ့ New Agent Of Atlas အဖွဲ့ဟာ အာရှတိုက်ကိုကာကွယ်ခဲ့ပြီး အာရှတစ်ခွင်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့ပါတယ်။
War of the realms ကြီးဟာ Thor All-Fatherဖြစ်ပြီး စစ်ငြိမ်းသွားတဲ့အခါမှာတော့ Shang-Chiဟာ Jimmy Woo ပြီးလျှင် အာဏာအရှိဆုံး Co-Leader ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ထို့နောက် Sword Master ကိုလည်း hand to hand နှင့် weapon combat များစွာကိုသင်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။
Phoenix Power ရရှိလာခဲ့ခြင်း
Enter The Phoenix event တွင် Shang-Chiဟာ Phoenix Force ရဲ့ Host ဖြစ်ပြီး Phoenix Forceကိုရှိခဲ့ပါတယ်။ Phoenix Invasion ကြောင့် Shang-Chiတစ်ယောက်တည်းရတာမျိုးမဟုတ်ပဲ Superhero တော်တော်များများဟာ Phoenix Force ကိုလက်ခံရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။Phoenix Invasionကြောင့် Earth မှာ ရှိတဲ့ hero တွေဟာ နှစ်ဖွဲ့ကွဲခဲ့ပြီး အချင်းချင်းချခဲ့ပါတယ်။ Shang-Chiဟာလည်း Phoenix Host ထားတဲ့ captain Americaနဲ့ combat ချင်းချရာမှာ များစွာသာလွန်နေခဲ့ပါတယ်။ Phoenix ပြန်ရောက်လာတဲ့အကြောင်းအရင်းက သူ့အတွက် လက်ရွေးစင်Host အသစ်တွေရှာဖို့ပါပဲ။
Shang-Chiဟာ Master Of Kung Fu ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် martial arts တွေအကုန်တတ်ပါတယ်။
Mixed Martial Arts သဘောမျိုးနဲ့ နာမည်ကြီး Legendary သိုင်းကျမ်းတွေကိုများစွာလေ့လာခဲ့ပါတယ်။
High Rated Assassin – ငယ်ငယ်ကတည်းက လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ရေးသမား‌တစ်ယောက်အနေနှင့် လေ့ကျင့်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် assassin တစ်ယောက်ရဲ့ Abilities ရှိပါတယ်။
Weapon Master – Shang-Chiဟာ Kung Fu Master တစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် လက်နက်တွေကိုဆောင်ရာမှာလည်းကျွမ်းကျင်ပါတယ်။ ဓား, လှံ, နံချပ်ကူ,နှင့် captian americaရဲ့ shieldကိုပင်ကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Chi – Chi က‌တော့ စိတ်အတွင်းအားဖြစ်ပြီး သိုင်းသမားတွေရဲ့အပြင်းဆုံး တိုက်ကွက်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Shang-Chiဟာ Chi အားအရမ်းပြင်းပြီး ထို Chi မှတစ်ဆင့် ကိုယ်ပွားခြင်းနှင့် fire Kung Fu ball အစရှိတဲ့ Abilitiesတွေပြန်ကွဲထွက်ပါတယ်။
Nervous System Control – Shang-Chiဟာသူ့ရဲ့ အာရုံကြောစနစ်ကိုကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး နာကျင်မှုတွေ တခြားသော mind controlလုပ်တဲ့အရာတွေမှုရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။
Pressure Point Locator – လူ့အပူချိန်နှင့်‌‌တည်နေရာရှာဖွေနိုင်ခြင်း
Shang-Chiဟာ လူ့ကိုယ်မှအပူချိန်ကိုနောက်ယောင်ခံလိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအစွမ်းကို dare devil နှင့် iron fist တို့လည်းသုံးနိုင်ပါသေးတယ်။
Dare devilရဲ့အာရုံခံစနစ်ဟာတော့ Shang-Chiထက်သာလွန်ပါတယ်။
Shang-Chi Hank Pym ရဲ့ဆေးရည်ကိုသုံးတုန်းကတော့
Sueprhumam strength, Size , speed Abilitiesများရရှိခဲ့ပါတယ်။
Spdier-Virus ထိတဲ့အချိန်တုန်းကတော့ Spdier-Manရဲ့ Ability အကုန်ရရှိသွားခဲ့ဖူးပါတယ်။
နောက်ထပ်သော အကြောင်းအရာတွေများအတွက် ZEUS ကိုသာ followလုပ်ထားလိုက်ပါ။
Character Info DC
Black Adam [ Origin | Story & Info ]
No Comments on Black Adam [ Origin | Story & Info ]
ZEUS မှာ DC အကြောင်းမတင်တာကြာပြီမလို့ အခုတစ်လော The Rock ကြီးနဲ့ Hit ဖြစ်နေတဲ့ Black Adam ရဲ့ အကြောင်းလေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
#ZEUS #RAY #BlackAdam
Black Adam ကို 1945 ခုနှစ်မှာ Fawcett Comics ကနေရေးဆွဲခဲ့တဲ့ The Marvel Family #1 မှာ စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။
ဆိုတော့က Black Adam နဲ့ Shazam တို့ဟာ DC ရဲ့ Original ဖန်တီးထားတဲ့ဇာတ်ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိသွားလောက်ကြမှာပါ။ 1973 ခုနှစ် Fawcett Comics ကပိုင်တဲ့ Shazam ဇာတ်ကောင်တွေကို DC ကရယူပြီးချိန်မှာတော့ Shazam #8 မှာ Black Adam စတင်ပြီး ပြန်ပါလာခဲ့ပါတယ်။
Black Adam ဇာတ်ကောင်ကို Shazam ဇာတ်ကောင်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ Writer ကြီး Otto Binder နဲ့ Artist C.C Beck တို့ကဖန်တီးခဲ့ကြပါတယ်။
A Slave In Kahndaq
Black Adam ရဲ့ Origin ကိုပြောရမယ်ဆိုရင် Kahndaq ရဲ့အကြောင်းကိုပြောရပါလိမ့်မယ်။
Kahndaq ( ခန်းဟ်ဒ့ဂ် ) ဆိုတာကတော့ Egypt ရဲ့ မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီး Black Adam တစ်ယောက် Power တွေမရခင်အချိန်မှာ Ibac ဆိုတဲ့အာဏာရှင်က အကြမ်းဖက်အုပ်ဆိုးလျက်ရှိပါတယ်။
Black Adam ရဲ့ Civilian Name ကတော့ Teth- Adam ဖြစ်ပြီး Shiruta ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးရယ် သာသမီးတွေရယ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ Aman ဆိုတဲ့ တူလေးတစ်ယောက်လည်းရှိပါသေးတယ်။
သူတို့ဟာ အဲ့အချိန်က ကျွန်မျိုးနွယ်တွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ အာဏာရှင်တွေရဲ့ နှိပ်စက်တာ‌ေတွကိုခံခဲ့ကြရပါတယ်။
တစ်နေ့မှာတော့ သူ့မိသားစုတစ်ခုလုံးက အာဏာရှင်တွေသတ်တာခံလိုက်ရပြီး သူနဲ့ သူ့တူပဲ လွတ်မြောက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူကတော့ ဒဏ်ရာအပြင်းအထန်ရထားပြီးတော့ သေလုမျောပါးဖြစ်နေပါပြီ။
Transported into Rock of Eternity
အချိန်မှာပဲ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ Wizard Shazam နဲ့ Council of Eternity အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ Rock of Eternity ကိုရောက်သွားပါတယ်။ Shazam ကြီးက Aman ရဲ့ သန့်ရှင်းမှုကိုတွေ့သွားပုံရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ Aman လေးကိုသူရဲ့ Champion အဖြစ် နေခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာ Kahndaq ကို အာဏာရှင်တွေအောက်ကနေလွတ်အောင် လွတ်ပေးဖို့ Aman ကိုတာဝန်တစ်ခုလည်းပေးလိုက်ပါတယ်။ Aman လေးကလည်း ဒီတာဝန်တွေ လက်ခံဖို့ဆိုရင် သေလူ့မြောပါးဖြစ်နေတဲ့ သူ့ဦးလေးကို Healing လုပ်ပေးဖို့တောာင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ အဲ့အခါမှာ Shazam ကြီးက Aman ကိုစွမ်းအားတွေပေးလိုက်ပြီး သူ့ဦးလေးကိုလည်း Healing လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ပြီးတော့ Shazam ကြီးက ထပ်ရှင်းပြ‌ပါသေးတယ်။ သူ့ရဲ့အစွမ်းတွေဟာ မိသားစုဝင်တွေကိုဆိုရင် မျှဝေလို့ရပါတယ်ဆိုပြီး ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက် Kahndaq ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီး Aman လေးဟာအရမ်းပျော်နေခဲ့ပါတယ်။ သူက သူ့လူတွေကို လွတ်လပ်အောင်လုပ်ပေးမယ် ပြီးရင် ငြိမ်းချမ်းမှုတွေယူဆောင်လာပေးမယ်ဆိုပြီး သူ့ဦးလေးကိုပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ဦးလေး Adam ကတော့ အာဏာရှင်တွေအကုန်လုံးကို အမှုန့်ချေပြစ်ပြီး သူ့မိသားစုအတွက်လက်စားချေမယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်။
The Rise of Black Adam
Adam ဟာ Aman ရဲ့ နည်းလမ်းအဆင်မပြေမှာရော သူ့မိသားစုအတွက် လက်စားမချေလိုက်ရမှာကော ဆိုးရိမ်ပြီး သူ့တူ Aman လေးကို သတ်ပြစ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့တူရဲ့စွမ်းအားတွေကို ယူခဲ့ပါတယ်။ အဲ့လိုနဲ့သူဟာ စွမ်းအားတွေရရှိပြီး အာဏာရှင်တွေအကုန်လုံးကို အမှုန့်ချေပြစ်ကာ Kahndaq ကို လွတ်မြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာ Shazam Film ထဲမှာပါခဲ့တဲ့ Seven Deadly Sin ကိုလည်း Black Adam ကပဲအနိုင်ယူပေးခဲ့တာပါ။ သူတို့ကို Wizard Shazam ကြီးက Rock Of Eternity ထဲမှာပဲ ဖမ်းဆီးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်မှာတော့ Teth-Adam တစ်ယောက်ဟာ Black Adam ဆိုတဲ့ Legend တစ်ယောက်ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
Murderering The Council of Eternity
ဒီလိုနဲ့ Black Adam က ပိုဆိုးလာခဲ့ပါတယ်။ သူ Rock of Eternity ကိုပါစတင်တိုက်ခိုက်ပါတယ်။ သူက Council of Eternity အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ Power တွေကိုပါ ရယူလိုတာကြောင့် သူတို့အကုန်လုံးကို သတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Wizard Shazam ကြီးက ကျန်ရှိခဲ့ပြီး Black Adam ကိုအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အနိုင်ယူပြီး အဝေးကို နှင်လွှတ်နိုင်ခဲ့တာပေါ့။ Wizard Shazam ကြီးလည်း နှစ်ပေါင်းများစွာ Rock of Eternityကြီးထဲမှာ Seven Deadly Sin ကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့ရပါတယ်။
Shazam! ( 2019) ထဲက Villain Dr Sivana ကို မှတ်မိကြလားဗျ။ Black Adam ကိုပြန်လည်နိုးထလာစေတဲ့ သူဟာ Dr Sivana ဖြစ်ပါတယ်။ သူက Adam ရဲ့ Tomb ကို 21 ရာစုရောက်တဲ့အချိန်မှာ သွားဖွင့်သလိုဖြစ်မိခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တန်း သူရှာဖွေခဲ့တာက Shazam ကားထဲကအတိုင်း Rock Of Eternity ကိုပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ 21 ရာစုမှာ Black Adam တစ်ယောက်ပြန်နိုးထလာပြီး မနူးမနက် Shazam Family လေးနဲ့ တွေ့ကြပါတော့တယ်။ သူတို့ ချကြတဲ့အခါတော့ SHAZAM တို့ကပဲနိုင်သွားပါတယ်။
( တကယ်တန်း Black Adam ရဲ့ Return က နည်းနည်းတော့ရှည်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က Origin ပဲအသားပေးရေးထားတာကြောင့် အဆင်ပြေအောင့် ချုံ့ရေးထားလိုက်တာပါ )
Shazam ဟာ နတ်ဘုရားတွေဖြစ်တဲ့ Solomon, Hercules, Atlas, Zeus, Achilles နဲ့ Mercury တို့ရဲ့ စွမ်းအားတယ်ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုတာကို သိမှာပါ။
Black Adam ဟာလည်း Shazam လိုပဲ နတ်ဘုရားတွေရဲ့ စွမ်းအားတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် Shazam နဲ့မတူတာကတော့ Egypt နတ်ဘုရားတွေဖြစ်နေတာပါ။
Shu ရဲ့ Stamina ( သက်လုံ )
Horus ရဲ့ Speed ( ပျံနိုင်တာကလည်း Horus ရဲ့ စွမ်းအားတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် )
Amun ရဲ့ Strength
Zehuti ရဲ့ Wisdom
Aten ရဲ့ Electric Power
Mehen ရဲ့ Courage တို့ဖြစ်ပြီး
အားလုံးသိကြတဲ့ အတိုင်း Magic တို့ဖြစ်ပါတယ်။
DC Multiverse ကြီးမှာ ကွဲပြားလာတဲ့ Timeline တွေ Universes တွေရှိပါတယ်။ Multiverse တွေ Parallel Universes တွေနဲ့ သိပ်မရင်းနီးသေးတဲ့သူဆိုရင်လည်း Loki လောက်ကြည့်ဖူးရင်သိမှာပါ။
အခု ဒီအကြောင်းကို မဖတ်ခင် DC Multiverse ကြီးရဲ့ History ကို အရင်သွံားဖတ်စေချင်ပါတယ်။
ဆိုတော့ New Earth ဆိုတာ အခုလက်ရှိ Prime Earth မဖြစ်လာခင် Timeline ဆိုတာ သိပြီးလောက်ပြီထင်ပါတယ်။
New Earth မှာဆိုရင်တော့ Black Adam က ပထမပြောခဲ့သလို ကျွန်တစ်ယောက်မဟုတ်ပဲ Kahndaq ရဲ့ မင်းသားတစ်ပါးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ Wizard Shazam ကြီးက သူ့ကို Champion အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးနောက်မှ Black Adam ဖြစ်လာခဲ့ပါ‌တော့တယ်။
နောက်ပိုင်းတွေမှာ Black Adam က Justice Society of America ရဲ့ Member ဖြစ်လာလိုက် J.S.A ရဲ့ Villain ဖြစ်လာလိုက်နဲ့ Anti Hero တစ်ယောက်ဖြစ်လာပါတယ်။
Black Adam Film ဟာဆိုရင်တော့ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ Cast နဲ့ Teaser တွေအရတော့ Prime Earth Origin နဲ့ New Earth Story ‌ ကို Mix လုပ်ထားတာမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Justice Society ကိုရော ထုတ်ပြမှာဖြစ်ပြီးတော့ အနာဂါတ်မှာ Zachary Levi ရဲ့ Shazam နဲ့လည်း ချိတ်ဆက်သွားမယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတာကြောင့် စိတ်လှုပ်ရှားစွာစောင့်စားရမယ့် Film တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ The Rock ကိုယ်တိုင်က သူရဲ့ ဇာတ်ကားကို Snyderverse မှာပဲ ပုံဖော်သွားမှာဖြစ်ပြီး Snyderverse Restore လုပ်နိုင်ဖို့ကို ကြိုစားသွားမယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်တာကြောင့်မလို့ အကယ်၍ RestoretTheSnyderverse မအောင်မြင်သွားခဲ့ရင်တောင် The Rock ရဲ့ Black Adam ဟာ DCEU အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့အနာဂါတ်‌တည်ဆောက်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။
2022 မှာ ထွက်ရှိလာမယ့် Dwayne The Rock Johnson တစ်ယောက် Producer အဖြစ်ကော Actor အဖြစ်ကော ဦးဆောင်ဖန်တီးထားတဲ့ The Black Adam Film ကိုတော့ Non-Stop( 2014 ), Orphan ( 2009) တို့ရဲ့ Director Jaume Collet-Serra က ရိုက်ကူးလျက်ရှိပြီး James Bond မင်းသားဟောင်းကြီး Pierce Brosnan နဲ့ အတူ တစ်ခြားသော နာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင်ကောင်းများစွာလည်း Iconic Character တွေနေရာမှာ ပါဝင်လာကြမှာဖြစ်တာကြောင့် Superhero Fan တိုင်း စောင့်မျှော်သင့်တဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်မှာပါ။
Origin & Story : [ Justice League Vol2, Justice League of America Vol3]
New Earth : [ J.S.A Secret Files and Origin ]
Black Adam Film. [ THR , IGN ]
နောက်ထပ် Content အမိုက်စားများနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါ့မယ်။